Apple Archives — iThadin
by iThadin Admin · Published 30th May 2018
Apple က နောက်ထွက်မယ့် မော်ဒယ်သစ်တွေမှာ OLED panel အဖြစ်သာ ပြောင်းသုံးတော့မယ်လို့ဆို
Apple ရဲ့ သတင်းအသစ်ကြောင့် ရှယ်ယာတွေထိုးကျကုန်တဲ့ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ Apple ရဲ့ သတင်းသစ်အနေနဲ့ ထွက်လာတာကတော့ OLED display ကို OLED panel တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲဖို့ လုပ်ဆောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း iPhoneX နဲ့ iPhone X Plus တို့ရဲ့ နောက်ထွက်တဲ့ ဖုန်းတွေမှာ သုံးမှာဖြစ်ပြီးတော့ နောက်ထွက်သမျှဖုန်းတွေမှာတော့ OLED display ကို သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။...
သုံးသပ်ချက်များ / ရေပန်းအစားဆုံး နည်းပညာ
by iThadin Admin · Published 4th April 2018
iPhone ကို စစ်/မစစ် စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ iCloud စစ်ခြင်းများအကြောင်း
iPhone အကြောင်း သိကောင်းစရာ iPhone တစ်လုံးကို အသစ်ပဲ ဝယ်ဝယ် သုံးပြီးသားပဲ ဝယ်ဝယ် စစ်/မစစ်ဆိုတာကို သိဖို့တော့လိုပါတယ်။ ဒီလို စစ်ဆေးနည်းကို သိထားရင် သင့်အတွက် တချိန်မှာ အသုံးဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ iPhone ကို စစ်မယ်ဆိုရင် သူ့မှာ ပါတဲ့ Clock App ကို အရင်ကြည့်ပါ။ဒီ Clock App ဟာ နာရီလက်တံတွေလှည်ပတ်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီနာရီလက်တံဟာ တချက်ချင်းသွားတာမဟုတ်ပဲ စက်နာရီလို...
by iThadin Admin · Published 31st March 2018
iOS 11.3 မှာ အရင်က ပြဿနာတက်ခဲ့တဲ့ နှေးကွေးခြင်းကို ပိတ်လို့ရပြီ
Apple ကတော့ သူ့ကတိအတိုင်းပြဿနာပြန်ဖြေရှင်းလိုက်ပြီ Apple ဟာ အရင်နှစ်က တက်ခဲ့တဲ့ ပြဿနာကို မှတ်မိဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလက iPhone တွေဟာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို နှေးအောင် လုပ်ခဲ့တဲ့ ဆိုတဲ့ သတင်းနဲ့ ဘက်ထရီကို ချိန်ညှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ iOS 11.3 မှာတော့ ဒီလို Throttling ပြုလုပ်တာကို ပိတ်ပင်နိုင်တာ ပါရှိပြီး ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ Function တွေ ထည့်လိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ်။...
by iThadin Admin · Published 15th February 2018
Facebook နဲ့ Apple ပူးပေါင်းပြီး iOS အတွက် သတင်း paywall များ စမ်းသပ်
မတ်လ ၁ ရက်ကစတင်ပြီး သတင်းမီဒီယာတွေက Facebook ရဲ့ iOS app အတွင်းမှာ paywall တွေကို အသုံးပြုနိုင်ပြီလို့ သိရပါတယ်။ Paywall တွေဆိုတာ လစဉ်ကြေးပေးသွင်းထားသူတွေပဲ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ Facebook ဟာ အောက်တိုဘာလအတွင်း Android မှာ paywall တွေကို စတင်စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့အချိန်တုန်းက လစဉ်ကြေးဝင်ငွေတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သဘောတူညီချက်ကို Apple က လက်မခံခဲ့ပါဘူး။ iOS...
Apple ဟာ HomePod ပြုလုပ်ဖို့ အတွက် ခန့်မှန်းချေ 216 $ ကုန်ကျမည်။
Apple ဟာ HomePod ပြုလုပ်ဖို့ အတွက် ခန့်မှန်းချေ 216 $ လောက် ကုန်ကျမည်။ Apple ဟာ 349$ နဲ့ ရောင်းချမဲ့ HomePod ပြုလုပ်ရန်အတွက် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေရဲ့ တန်ဖိုးနဲ့ တင် 216 $ လောက် ကုန်ကျမှာဖြစ်တယ်လို့ Bloombergနဲ့ TechInSights ရဲ့ စစ်တမ်းတစ်ခုအရ သိရပါတယ်။ TechInSights ရဲ့ စစ်တမ်းအရတော့ အတွင်းထဲက ပါဝင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့...
by iThadin Admin · Published 8th February 2018
Apple Pencil အသစ်မှာ Gesture ပါဝင်လာမည်
Apple ရဲ့ နောက်ထွက်မဲ့ Apple Pencil အသစ်ဟာ Screen ပေါ်မှာတင်မဟုတ်ပဲ တခြားသော မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပါ အသုံးပြုလို့ ရလာတော့မှာပါ။ အခုလက်ရှိ Apple Pencil တွေကတော့ iPad Pro မှာပဲ အသုံးပြုနိုင်သေးတာဖြစ်ပေမဲ့ Apple ရဲ့ နောက်ဆုံး သတင်းတွေအရတော့ Apple Pencil ကို iPad Pro မှာတင်မကပဲ တခြား device တွေမှာပါ အသုံးပြုနိုင်တော့မယ်လို့...
Essential Phone ဖုန်းမှ magnetic headphone jack ကို စတင်ထုတ်လုပ်
Asus ရဲ့ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ နှလုံးနဲ့ သွေးတိုးကိုစောင့်ကြည့်ပေးမယ့် VivoWatch BP
ပစ္စည်းပစ္စယတွေကို နေရာချရာမှာ အကောင်းဆုံးတိုင်းတာပေးမယ့် Measure App သစ် iOS 12 မှာ ထွက်ရှိ
Uncategorised / သတင်းများ
Google က Snapdragon 710 ပါတဲ့ တန်ဖိုးနည်း Pixel Phone ကို 2019 မှာ ထုတ်မည်
အစားအသောက်တွေပို့ဆောင်ပေးဖို့ တရုတ်မှာ Drone တွေသုံးမည်
Apple က Shazam App အတွက် ဒေါ်လာ သန်း 400 တန် ဝယ်ယူမှု ကမ်းလှမ်းချက်
OnePlus 5T က Netflix, Amazon Prime, Google Play Movies တို့ကို မဝင်နိုင်တဲ့ ပြဿနာဖြေရှင်း
iPhone X ကို ပြည်ပတင်ပို့မှုအတွက် ပိုမိုဆွဲဆောင်မှု ရှိနိုင်တဲ့ အရာတွေ ပြောင်းလဲ
Nvidia ရဲ့ အမြန်ဆုံး GPU ဖြစ်တဲ့ Titan V ထွက်ရှိ
Android android app app Apple Apple Watch apps CES2018 Chrome Drone Elon Musk's flamethrower Facebook Galaxy S8 Game Google HTC HTC U12 Huawei Instagram intel IOS iOS Apps iPhone iPhone X LG Messenger MWC 2018 new feature News Nokia OnePlus 5T oreo Reviews rumor Samsung Samsung Galaxy S9 sony Speaker Tech Tesla uber update update news updatenews wearable xiaomi
iThadin © 2020. All Rights Reserved.